Shaapiyoonaan liigii piriimeerii addaan cite
Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa marsaa lammaffaan torban 22fa Sanbata, Dilbataafi Wiixata darbees magaalota naannolee adda addaatti itti fufe yoo oolu, Jimmaa Abbaa Jifaar ammas dursaa jira.
Jmmaa Abbaa Jifaar dura deemaa jiraatus sababi yeroowwan gara garaatti leenjistoonni, dura deemtonni kilabootaa, taphattoonniifi deegartoonni murtee kennitoota reebaniif hanga falli argamutti shaampiyoonichi addaan citeera.
Keessumaa kilaboonni Waldiyaafi magaalaa Faasil, Walwaaloo Addigiraat murtee kennitootaafi gargaartootasaanirratti miidhaa olaanaa godhaniin hanga fallisaa argamutti hintaphachifnu jechuudhaan mormii uumameeni.
Walmorkiiwwan hanga ammaatti adeemsifametti kilabni Jimmaa Abbaa Jifaar qabxii 39n shaampiyoonicha dursaa jira. Bulchisni magaalaa Maqallee qabxii 35n, Qiddus Giyoorgis 34n sadarkaa lammaffaafi sadaffaarratti argamu. Yeroo dheeradhaaf liigicha dursaa kan ture Dadabiit qabxii 33n afraffaadha.
Akkasumas Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa, Buni Itoophiyaafi Magaalaan Faasiil galchaan walcaalanii wal qixa, qabxii 33n akkuma walduraa duba jiranitti sadarkaa shanaffaadhaa hanga torbaffaarratti jiru qabataniiru.
Magaalaan Hawaasaa qabxii 30n, Waldiyaafi Bunni Siidaamaa qooda galchaatiin walcaalanii qabxii 27n, Raayyaan Ittisaafi Arbaa Minci galchaan waldursuun qabxii 23n, Humni Ibsaa qabxii 22n sadarkaa saddeetaffaadhaa hanga 13ffaarratti argamu.
Akkasumas bulchisni Magaalaa Waldiyaafi Walwaaloo Addigiraat garaa garummaa galchaan wal caaluudhaa qabxii 20n, Dirre Dawaan qabxii 19n gara liigii biyyaalessaatti gadi sigigaachuf qarqararratti argamu.
Torban kana/This_Week 9646
Guyyaa mara/All_Days 1819066